१ बर्ष अघि आमाको मृत्युको बदला ६ जनाको हत्या गरेर लिए लोकबहादुरले ! यहाँ बाट सुरु भएको रहेछ रिसिबी पुरा पढ्नुहोस. - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeकर्णाली प्रदेश१ बर्ष अघि आमाको मृत्युको बदला ६ जनाको हत्या गरेर लिए लोकबहादुरले...
१ बर्ष अघि आमाको मृत्युको बदला ६ जनाको हत्या गरेर लिए लोकबहादुरले ! यहाँ बाट सुरु भएको रहेछ रिसिबी पुरा पढ्नुहोस.
किमाथाङ्का । सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–१ उम्लिङ खोला गाउँमा एकै परिवारको छ जनाको ह’ ‘त्यामा सं’लग्न आरोपितले ह’ ‘त्या गरेको खुलेको छ । घट्नामा सं’लग्न आरोपी २६ वर्षीय लोकबहादुर कार्कीले छ जनाको ह’ ‘त्या चि’र्प’ट प्र’हा’रबाट गरेको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन् ।
आइतबार इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले यसबारे जानकारी गराएको हो । लोकबहादुरले सबैभन्दा पहिले ठूलो बुबा तेजबहादुरलाई नै ह’ ‘त्या गरेको प्रहरीलाई बयान दिएको प्रदेश नम्बर १ का प्रहरी प्रमुख नायब महानिरीक्षक अरुण बीसीले पत्रकार सम्मेलनका जानकारी दिनुभयो । तेजबहादुरका भतिज लोकबहादुरले पछाडिबाट प्र’हा’र गरेर ढ’ला’एका थिए । तेजबहादुरको ह’ ‘त्या गरेको घटना देख्ने सबैलाई मा’र्ने योजना बनाएको प्रहरीसमक्ष बयान दिएको नायब महानिरीक्षक बीसीले बताउनुभयो ।
त्यसपछि घरको पछाडि खोले पकाउँदै गरेकी हजुरआमा पार्वता कार्कीलाई समेत भित्तामा प’टक–प’टक टा’उ’को ठो’क्का’ए’र ह’ ‘त्या गरेर घरतर्फ लागेको प्रहरी समक्ष बयान दिएका थिए । लोकबहादुरले घटनामा प्रयोग गरेको चि’र्प’ट कुँ’डो पकाउने अ’गेनामा हा’ली न’ष्ट गरेको बताएका थिए । शुक्रबार रातिदेखि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दै सोधपुछ गरेपछि शनिबार बिहान आरोपीले घटनामा आफ्नो सं’लग्नता स्वीकार गर्दै आफ्नो ‘टा’र्गेट’मा तेजबहादुर मात्रै रहेको बताएका थिए ।
एक वर्षअघि लोकबहादुरकी आमा तेजबहादुरको घरमा ल’डेकी थिइन् । उनको आमा बे’हो’स भएपछि उपचारका क्रममा झापामा मृत्यु भएको थियो । लोकबहादुरले आफ्नी आमाको मृत्युको कारण तेजबहादुर नै भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
प्रहरीको निगरानीमा रहेका लोकबहादुरको घरमा र’ग’त ला’गेको कपडा र ह’ ‘त्यामा प्रयोग गरिएकोजस्तो देखिने ह’ति’या’र प्रहरीले फेला पारेको थियो । घटनाको अनुसन्धानमा प्रदेश नम्बर १ का प्रहरी प्रमुख नायब महानिरीक्षक बीसी, सङ्घीय प्रहरी एकाइ कार्यालय धरानका प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहाल र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) टोलीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रुगम कुँवर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक लालध्वज सुवेदी घटनास्थलमा खटिनुभएको थियो ।
Previous articleसांसद गंगा चौधरीको जीवनलिला : श्रीमानलाई पिए बनाएर ‘सौता’लाई दास बनाएको खुलाशा !
Next articleमिर्चैयाको पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा खाल्डो नै खाल्डो , स्थानीयले गरे अवरुद्ध